Kaalinta 3: Hal ka mida hawlkarnimadii haweenkeenna – Garanuug
Home / Tartan / Kaalinta 3: Hal ka mida hawlkarnimadii haweenkeenna
Farxiya Aadan Yuusuf February 3, 2018	Tartan, Tartan-Curiseedka Muuse Galaal Leave a comment 8,608 Views
Curiskii ku guuleystay kaalinta saddexaad ee Tartan Curiseedka Muuse Galaal ee Hiddaha iyo Dhaqanka 2018.
Sinji aw ka soo jeeda iyo sumad ma guuraana
Sowraca gobeed culimadiyo niman salaadiina
Sifa gaara baan leenohoo nalagu soocaaye.
Intaan seben xumaadkiyo na helin saxal wax duugaaya
Oo aan siyaasadu murkacan oo dhib ina saaqin
Oon laga saqlayn oo hiddaha eeyar laga siiban
Sanca jayna iyo lama aqoon waxay sameeyeene
Sandal iyo xasiig iyo ma jirin suufka manta ahe
Kaba saan ah dhidid dhawr saroo suuman lagu giijay
Salladaale caws qaaliyoo daabac wada saran
Dermadii sibbaaqiyo lahayd midabba soocsoocan
Kebda maydhaxdii soohanayd laga samaynaayo
Selled qoriya saab xididahiyo saama wada dhiina
Sibraar haraga oo caanihiyo saadka lagu qaato
Sati caw ah xeedhiyo fandhaal soorta lagu quuto
Baarrahadi sixintiyo quddaha subagga soo saara
Salsalka iyo jinawgaw ahaa soor dadkii hore‟e
Solay hiliba bay cuni jireen saaftin geedalehe
Sabar liica malahayne way socod badnaayeene
Sagaal boqol ka badan qalabka aan sadarku koobayne
Aadane inala siman ma jiroo saran dunideere
Sifahaa ilaashada dad waa kaga sarraynaaye.
Qowmiyad ahaan soomaalideennii hore waxay lahaayeen dhaqan iyo hidde ay soo kala dhaxlayeen in badan kaas oo aynnu ab iyo sinjiba u lahayn lafta iyo ruugga kaga wada jiray oo ay in badan ku soo caano maali jireen. Dhaqankaa, wuxu bud-dhiggiisu ahaa hawlkarnimo, xilkasnimo, adkaysan, sarriig, murti hadal, martisoor, maganbarin, geesinimo, muhanninimo, waracnimo, garyigil iwm. Bulshadeenaasi Waxay ahayd bulsho rag iyo dumar iyo yar iyo waynba u darban ebyidda iyo dhaqarya tirka hawlaha la gudbood oo uu qofkastiiba ku leeyahay qoys iyo bulsho ka dhexow door muuqdana ku leeyahay. Waxa jirtay qiimayn ey da‟ aadda qofka ku qiimeeyeen oo marba heerka uu qofku joogo haddii laga waayo ay muujinayso inaanu qofkaasi suun caqiibo lahaynwaxayna oran jireen „qofka 7 ilaa 10 jirka ah aad dhabqalalo ka waydo, 20 ilaa 30 jirka aad xarrago ka waydo, 40 ilaa 50 jir aad xoog ka waydo, 60 jir ilaa 70 jir aad talo ka waydo, 80 ilaa 90 aad tuxbas ka waydo midna caqiibo male‟. Taasoo qofku maantuu dabka baydho ilaa iyo maantuu itaal qabo ka dhigaysay qof xilkas ah oo masuuliyadi iska saaran tahay haddii uu la soo bixi waayo firfircoonidii iyo hawl karnimadii lagu yiqiin dadkiisana uu ku mudan jiray culays iyo cambaarayn taas oo wiilkana ka yeeli jirtay in loo arko laga roone aan nin karmeed ahayn kalana kulma dadkiisa eedayn iyo canaan joogta ah mararka qaarna looba sameeyo naanayso inantana ka dhigi jirtay habas uu filkeed dhaafay geyaankuna ka urursado faceeduna ka maadsado ficil darrideeda halka taa lidkeedana wiilka dardarta la soo kaca uu ahaa bulshadaa ad adag dhexdeeda wiil aabbihii ku dhaato aadna loogu duceeyo loona sii dhiirriyo. Inanta iyana doorkeeda durba ka soo dhalaasha oo feeyigada iyo qiimiyoodda la soo naaq tiraahda hooyadeed iyo xigtadeeduba u bogi jireen durbana la ilaalaysan jiray looguna ducayn jiray: laba reer kugu raysay iyo meel roon mar. Waa loo ildheeraa qofka xoola seegga ah kan qannaaca ah, fulayga, inanta baalida ah ama aan aqoon galeebaanka xoolaha sida karriimada, suuradinta, qalliinka, saafidda, sumadda iwm waxayna ahaan jireen kuwa sheegga oo naanaysa ku yeesha bulshadaa dhexdeeda ama farta laysugu fiiqqo oo qayrkood ku maadsadaan.
Inkastoo qofwalbaahi uu noloshaa dhacan iskaga lahaa oo aanay jirin cid macna la’aan isaga noolayd misna waxa kaalmaha ugu adadg bulshadaa kaga jiray haweenka. Haween keennu waxay ahaayeen kuwa qayb libaax ku leh dhaqankeenii hore waxay u darbanaayeen hawl kasta oo karaankooda ah. Gabadha soomaaliyeed intay yartahayba waxay ahayeen kuwa lagu ababiyo hiddaha iyo dhaqanka bulshadooda. Waxay ahayeen kuwa hiigsata hooyadood ama walaalo hood ka waawayn oo waataynu oran jirnay “gabari waa hooyadeed” mar kalena “gabadhii hooyadeed hadhuudhka tuntaa iyana haadintay taqaannaa” markaba waxay baran jireen xoolaha galeebaankood, laan mullaaxeed ay maydhaxda rara iyo xadhkaha ka diirato, sida xoolaha loo qalo, loo qanja tiri loo saafo, cad magoolka iyo wixii la halmaala.
Halkaa waxan ka iri:
Hablii dhererka u badnaa
Hablii dhexdu madag ahayd
Afkuna uu dhuxul ahaa
Hablii maarriin dhalaal
Hablii madow dhuxula iyo
Casaan dhiinaba lahaa
Xarrago dhalanka u lahaa
Asluub dhaqanka u lahaa
Adkaysan u dhaqan ahaa
Xishoodka ku dhaadan jiray
Xumaanta ka dhawrsan jiray
Wanaag isu dhiibi jiray
Dhegtooda ilaashan jiray
Dhallaanka barbaarian jiray
Ilmaha dhooldhoolin jiray
Xambaara ku dhuujin jiray
Hiddiyo dhaqankii wacnaa
Hablii ka dhex muuqan jiray
Hablii dhirta diiran jiray
Hablii dhuub soohan jiray
Hablii xadhig laba dhan rara
Dhakhsaba ka samaysan jiray
Hablii dhigihiyo udbaha
Dhismaha ka yagleeli jiray
Hablii dhoontiyo ubbada
Dhigaalka ku kaydsan jiray
Hablii dhiilaha la culo
Dhitada ku adkaysan jiray
Hablii dhalan dhool biyaha
Qaraabta ku dhaamin jiray
Hablii dhiig joojintoo
Markii dhagar uu nin galo
iyaga godob reeb dhaxdina
markaa loo dhiibi jiray
hablii wiilkay dhal
barbaarta dhiggiisa iyo
faciisaba dhaafi jiray
hablii madhaxiyo dhitada
Samaantaa ay dhidbaan
Xigaalku ku dhacaran jiray
Hablaha dhaxalkoodu yahay
Mid aan qalin lagu dhammayn
Dhawaaq lagu koobi Karin
Xiisana aan laga dhergayn
Dhulkeenuun baa lahaa.
Gabadha soomaaliyeed waxay hawleheeda ku ebyi jirtay adkaysan, afgaabni, asturnaan iyo indheer garadnimo. Hawlaha dumarka goonnida isaga ahaa waa fara badanyihiin waxana ka mid ah guriga la degi jiray ama aqal soomaaliga oo ay kor iyo hoosba iyagu farsamadiisa lahaayeen. Soomaalidu waxay u badnayd reer guuraa raacato ah. In yar oo degaan aan guur guurin ah mooyee badidoodu waxay ahaayeen hoggaan ku daaq u hayaama hadba meeshii uu hillaa ka bilig yari ama qadhin iyo biya ku dambeeyaan. Soomaalidu waxay ahayd dad mar ka guura abaar, marna colaad, marna shilin iyo qaniin ku dillaacay oo ay ka diga rogtaan marna saxal iyo cudur deegaankooda lagu sheegay. Haddaba maadaama aan meelna rigli lagu ahayn waxay samaysan jireen aqalkaa ay farsamadiisa haweenku lahaayeen kaas oo u sahlanaa inay si fudud marna u rartaan marna u dhistaan gaadiidkooduna u qaadi karayey. Aqal soomaaligu waa guri aah ka dhicin daaraha aynnu maata ku jirno marka laga eego xagga dugsiga iyo roob celiska dhanka quruxdana wuxuba ahaa ashqaraar aan indhaha lagu ahayn Karin.
Aqal soomaaligu waxa uu ka koobnaa agab kala duwan siyaaba kala duduwanna ay haweenku u farsameeyeen mid ay dhirta ka gooyaan, mid ay soo diiraan, mid ay xidid ka soo siibaan, mid ay hargaha xoolaha oo la caayeeyey ama la aslay ka keenaanba. Aqalku waxa uu ka koobanyahay qaybahan soo socda:
Qori: Qorigu waa kan haya guriga dhulkana loogu qotomiyo.
Xadhig: xadhkaha lagu xidhxidho dhisme iyo rarba.
Raro: raradu waa dugsiga, qurxinta iyo asturaadda aqalka. Dhammaanteedna waa dadab kor iyo hoosba.
Gurgur: gurgurku waa qalabka guriga hoostiisa lagu isticmaalo oo jaadad badan leh.
1- Qorigu waa saddex nooc oo kala ah udbo, dhigo iyo lool. Udbaha iyo dhiguhu waa qorya xoogaa dhumuca leh waxaana laga gooyaa dhir ay ka mid yihiin deyibka, dhebiga, dhosoqda, xayramadka ikk.
Loolku isagu waa duur lagu maray harag la dareeriyey.
2- Xadhkaha: xadhkuhu waa laba jaad oo kala ah yeel iyo maydhax, yeeshu waa xadhig caqiibale oo aad u adag kana samaysan harag geel ama adhi xadhkahaa yeesha ah waxa laga dhigtaa cayn, bayd, gibilxidhe iyo dhafar. Xadhkaha maydhaxda ah waxa laga diirtaa dhir ay ka mid yihiin galool, qudhac, bawbawlaho, biyays, yubbe ikk. Xadhkahaa maydhax waxa laga samaystaa waa laba dhan rare iyo garraar.
3- Rarada: radadu waa aqalka inta sare oo labaysa qoriga waa duldhis, dadab iyo dugsi ka dhexow. Radadu waa dhawr shay oo kala ah: cawska, kebedda, lammada ama jarcada, aloolka, abjedka iyo dermada.
Cawska ama hararku waa shay ka samaysan geedaha waxana ugu mudan geedaha laga sameeyo maadha, bilingada, caws guduudka, denyada, maydhada iyo gargoorta. Cawsku waa noocya badanyahay, kala waawayn yahay, kalana qurux badan yahay. Noocyada cawska waxa ka mid ah isku joog, caws cad, haldhaafyaale, waaxyaale, salldaale, sinjab iyo irkig.
Kebedda: kebdaha waxa laga sameeyaa maydhaxda galoolka marka laga reebo dhaan raacda oo iyadu suuf ah. Kebbedda muunaddeedu waa dun cas iyo dun madow. Miiddeedana waxa laga sameeyaa geedka mooliga. Kebeddu waxay ka koobantahay miid, maleeg, beeg, badhookh, iyo dun. Noocyada kebduhu waa: bar iyo muusaley, bawda wayn, hohob, halcad, iyo dhaan raac.
Dermada: dermadu gogosha iyo rarada labadaba waa ay gashaawaxana laga sameeyaa maydhada iyo cawda gadhyarta ah. Maydhada ama cawda inta aan la falkin ka hor waa la midabeeyaa iyada oo loo adeegsanayo dhir ay dacartu ka mid tahay. Dermada kuweeda dhismaha gala waxa ka mid ah layddi iyo derma cad.
Aloolka inta badan aloolku waxa keliya oo uu kordhiyaa waa dugsi waxana laga sameeyaa duurka iyo suuf.
Lammada: lammada ama jarcadu waa saanta loda waawayn laba saamood oo gees ah baa laysku tolaa sidaadaana rarada looga mid dhigaa.
4- Gogosha: gogoshu waa falag ama waa hargo. Saamaha xooluhu siiba ishinka iyo falagta dhisme ahaan iyo gogol ahaanba waa loo adeegsadaa. Dermooyinka jaadadka la goglado waxa ka mid ah jeexgogol, darfooley, isku qub, iyo salli. Gogosha hargaha ah waxa lagala baxaa adhiga iyo lo‟da waxana ka mid ah jaadadkooda waylaalis, harawaxar, maqaar, kaldho iyo masalle. Masalluhu waa shey salaadeed waana harag adhi la megdeeyey.
Marka aqalka intaasi u dhantahjay waa kaalay arag iyo iska daawo. Waa tii uu ninkii la dhacsanaa afadiisaa cusub iyo aqalka loo sharraxay dhanna kaga welwelsanaa maatidii kale uunlahaa:
Jaaheeda goortaan arkiyo jimidh wanaaggeeda
Iyo aqalka JEEXGOGOLA IYO RARADI oo jiifta
Hadba waxan jeclaystaa inaan kan iska joogaaye
Carruur jaahiliiniyo haween aniga ii jeeta
Jeeskiina wuxu doonayaa inan jarmaadaaye.
Samaynta rarada inta ay ku dhex jiraan haweenku waxa jirtay suugaan hees hawleed ah oo ay nisku maaweelin jireen iyaga oo isu jiibibinaya.
Hees hawleedda cawska/hararka:-
Cawskaygow sabool diidoow hoyal
Ay hooyalaayow hoyal
Kaan saaxil lagu geyney hoyal
Soddon lagugu baayiciney hoyal
Ey hooyalaayow hoyal
Saddex lagugu kala goyney hoyal
Sidka dhalay lagaa bixiney hoyal
Yaa sameeyey lagu orane hoyal
Suwar cagaha kula dhiciney hoyal
Ay hooyalaayow hoyal..
Kebeddu nagu raagtoo
raggana mawgu yeedhnaayey?
Xadhig ma reebaay
Hadmaan kaa xilbeelaayey?
Waxad iga xil beeshaaye
Geedba geedka u dheer
Galool mudhay mullaaxdiisey.
Qaarri laga diiryey
Qorshoy quruxi maadaayey?
Wiring wir qoodleeyey
Koronka cuni maynoo
Karuur geel malla hayaayey?
Meeshu waa hawdoo
Hashii wiil malloo diraye?
Naagan kebed ridhaney
ninkeedii dabayl raacyeey.
Gabadha kebedda lehey
adaan kayd u sii dhiganey.
Wiilka kebedda lehow
Adaan koron u googoyney.
Dhismaha aqalka: Aqalka seeskiisu waa reedda oo ah dudbaha oo la taago iyo dhigdgexooytinka oo lagu qabta aqalladu waa kala waawayn yihiine marka reedda iyo dhigdhexooyinka laysku dhammeeyo oo loolka dusha laga saaro, garraarka dhigadaxa ahna lagu idleeyo baa rarada la saaraa. Aqalku wuxu leeyahay laba udub xoog waana labada udub oo afaafka aqalka is dhaafsan. Soomaalidu dhul balaaran bay degtaa magacyada aqalka waa lagu kala duwanyahay— waxase ka mid ah iswadh, galbeedi, laba daryaale iyo afar daryaale.
Gurgurka: gurgurku waa agab isku jir ah oo leh mid caanood, mid hilbood, mid subag iyo mid guraangurka lagu urursado. Waxa ka mid ah gurgurka sati, selled,baarroho/ubbo, gunnad, aagaan,sambiil, abxad, iyo tebbed.
Intaa waxa soo raaca weelasha guriga oo weel caanood, weel biyood ikk leh. Weel caanoodka oo ah farsama ashqaraarle oo dumarku sameeyaan waxa ka mid ah hadhuub gaalka, caw lo’aadka, jaafka, dhiil quraanta, dhiil carruureedda iyo sibraarka. Weelashaa waxay dumurku ka tolaan dhir ay ka mid yihiin qabo, argeeg, ilgaal mooli, caw iyo xaskul. Weelkaasi inta uu gocayada yahay waala aslaa oo geedka qoroonta asalkiisaa lagu aslaa inta uu xooloobayona waa la deebiyaaye lama culo oo dhir ay ka mid yihiin dureenta, bur labeenka, iyo jallabku baa lagu deebiyaa. Markay xooloobaan oo jilfaystaanna waxa lagu culaa maygaagga, caana macayska, higlada iyo bilcilka jiliftiisa.
Weel biyoodka waxa laga suubsan jiray isna haragga xoolaha oo la hoodhiyey lana alsay weelkaa lagu dhaansan jiray oo aad u biyo qaboobaa waa lagu ilaalin jiray asalka si aanu u xumaanna waana dhaqarya tirka weelka caanaha iyo biyahaba. Weelkaa waxa ka mid ah qarbedka ama xabka oo riyaha lagala baxo, wadaanta, kalaxa iyo ugarta.
Igu dambayntii waxan iri:
Ma hawaawiyaayee haddaan tebiyo hawraarta
Meeshii habboon baan ka oran hadalka qaarkiiye
Iska hubiya nuxurkiisa oo yuu hal idin seegin
Hidda sami hannaan lagu farxoo maanka lagu haysto
Xasuus hodona dhaqan haybadlihi
Hagarli‟ida shaqadaada iyo hawsha fulinteeda
Hanbalaalaqoo laga rebiyo heega sare gaynta
Hufnaan iyo xarrago uumiyuhu heedhe kuu qire e
Hagoog quruxsan iyo shaydr aad hu isku gaadhsiiso
Sabir lagu hoggaanshoo ilmaha hilinsan loo jeexo
Dhaxdin haakah tari iyo xigaal duco hibaynaayaa
Kun sifoon hal loo tirin karayn hubanti weeyaane
Hooyooyin idinkaa lahaa dhaqan hufnaan tiisa.
W/Q: Farxiya Aadan Yuusuf
Previous Tartan Curiseedka Muuse Galaal ee Hiddaha iyo Dhaqanka
Next Kaalinta 2: Garta dhaqanka iyo garsoorka Soomaalida